အမေရိကန် လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Ann Richard စစ်တွေမြို့က ရပ်မိ ရပ်ဖတချို့နဲ့ ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက်နေ့က စစ်တွေမြို့ပြည်နယ် ECC ရုံးမှာတွေ့ဆုံစဉ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ လူဝင်မှု၊ ဒုက္ခသည်များနဲ့ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာရေးဆိုင်ရာ လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Ms. Ann Richard ဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စစ်တွေ မြို့ ပြည်နယ် ECC ရုံး မှာ အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေ၊ စစ်တွေမြို့ ရပ်မိရပ်ဖတချို့နဲ့ ဒီကနေ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ ပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုတွေ့ဆုံရာမှာ Ms. Ann Richard က ရခိုင်ပြည် နယ်အတွင်းက လက်ရှိပကတိ အခြေအနေတွေကို ထဲထဲဝင်ဝင်သိရှိအောင် လေ့လာသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် လူပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးနဲ့ စကားပြောဆိုခွင့်ရရှိဖို့ အရေးကြီး တယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဆောင် ရွက်ရာမှာ အားလုံးအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိစေနိုင်မယ့် ငြိမ်းချမ်းရေးမျိုးကိုဆောင်ရွက်စေချင်တယ်လို့ Ms. Ann Richard ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ စစ်တွေမြို့ရပ်မိရပ်ဖတွေဘက်ကတော့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ မွတ်စလင်တွေဘက်တစ်ခုတည်းကို အလေးထား ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေရှိခဲ့ပြီး ဒေသခံရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ ဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ လျစ်လျူရှုခံလာခဲ့ရတာကြောင့် ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေထက်နိမ့်ကျတဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားကျေးရွာတွေကို သွားရောက်လေ့လာစေလိုကြောင်း ပြောခဲ့ကြပါတယ်။
Ms. Ann Richard နဲ့အဖွဲ့ဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ဒီကနေ့ကနေ ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်နေ့ အထိ ၄ ရက်တာရောက်ရှိ လာတာဖြစ်ပြီးတော့ မနက်ဖြန်မှာ ဘူးသီးတောင် မောင်တောဒေသကို ဆက်လက်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မောင်တောမြို့နယ်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဒုချီးရာတန်းကျေးရွာကို သွားရောက်လေ့လာ မှာဖြစ်သလို သူ့ရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ခရီးစဉ်အတွင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ မွတ်စလင် နှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေ၊ အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
Dear Ms. Ann Richard, We, all Arakanese people, love the peace; however, you should carefully learn about so-called Rohingya Bengali Muslims, who have committed crimes against humanity to native Arakanese people since May, 1942. The best way to solve is to pickup them to US, as well any OIC third countries. This isagood solution both your concern and concerns of indigenous people of Arakan.
Jan 16, 2015 02:57 PM